Abavelisi bezixhobo zeBhola eziDibeneyo kunye nePitaman - iBhola yeZinto eziDibeneyo zeBhola kunye nePitaman Arm Tool kunye nabaxhasi
Ukudibana okuHlangeneyo kwemihlathi yomhlathi
Inombolo Umba: BT9058
I-5pcs iJaw Ball ebuyiselwayo yokudibanisa iseti, isahluli sokususa isilungisi esitshintshayo
* Utshintsho olukhawulezayo olunobuchule kunye nesenzo esilula sefoloko efanelekileyo
* Nika amandla umsebenzisi ukuba akhethe ubungakanani bomhlathi ochanekileyo ngaphandle kokuthatha i-extractor epheleleyo kwisithuthi
* I-angle yokuvula eguqukayo
Iindlela ezilishumi zeSilayidi seHammer Setha iBT9027B
Inombolo yento: BT9027B
* Ten indlela isilayidi isando utsala iseti yingqokelela ubhetyebhetye lwezixhobo ezisetyenziselwa iintlobo ezahlukeneyo izicelo puller. Ingasetyenziselwa ii-asi ze-flange type, ii-seal ze-oyile, kunye namanye amalungu afanelekileyo. Iseti ibandakanya iindlela ezi-2 kunye neendlela ezi-3 ezingasetwa ngaphakathi nangaphandle.
I-5pcs Tie Rod Ball Joint Pitman Arm Isixhobo seKhithi
Inombolo Umba: BT9005
Inkcazo yemveliso: Le seti ye-5pcs yeBhola edibeneyo yeSahluli seti siseti yobuchwephesha yezixhobo zeemoto kunye neelori ezikhanyayo. Ngolu seto ukusebenza kwakho kolondolozo kuya kuphuculwa kakhulu, isiqingatha somsebenzi sineziphumo ezibini. Iseti ipakishwe kwimeko eqinileyo, beka izixhobo ngokulandelelana, awusoze ulahlekelwe zizixhobo ngale meko yecompact. Izixhobo ziyilelwe ngokudityaniswa ngokuqinileyo okuza kuhlala kuzinzile. 5pc tie rod pitman isahluli sekhithi yokwahlula amalungu ebhola kunye neentambo zokubopha. Iifolokhwe ezintathu ezinemiqadi yokutshintshela ukusetyenziswa ngesando esiqhelekileyo okanye isando somoya.
I-6pcs Isixhobo seThuluzi lokuPhela eliPhambili
Inombolo Umba: BT6020
Ingcali yeNdawo yokuPhelisa abaPhezulu iPitman Arm Tool
* Esi siKhokelo seBhola esiHlangeneyo seBhola yesixhobo senzelwe ngokukodwa ukwahlula ngokulula ukususa ukudityaniswa kwebhola, intonga yokubopha engaphambili kunye nengalo ye-pitman kwiimodeli zemoto ezaziwa kakhulu. Ingena ngokugqibeleleyo kwiimoto ezixineneyo, iimoto eziphakathi kunye neetraki ezilula, KODWA ayihambelani neemoto ezinobungakanani obukhulu, ubungakanani obuphakathi kunye neelori ezipheleleyo. kunye namalungu ebhola kwizithuthi ezininzi.
I-5pcs Umsebenzi oMninzi weTayi wokuPhela kweBhola esiDibeneyo seThuluzi lokuLungisa izixhobo ngokuzenzekelayo
Inombolo Umba: BT2511
ISICELO: Umahluli odibeneyo webhola usetyenziselwa ukwahlula ibhola ngokudibanisa nengalo yokuxhasa imoto kwizithuthi zangaphambili, zombini zasekhaya kunye nokungenisa.
UMGANGATHO: Olu seto luza kunye nolwakhiwo lwentsimbi olunye oluqinisekisa ukomelela kunye namandla okumelana nomsebenzi onzima wokunyanzelwa odluliselwe kwizincamathelisi zeemoto kwigaraji lakho lasekhaya okanye emsebenzini.
Umahluli odibeneyo webhola (Umhlathi omkhulu)
* Ukulahla uyilo olomeleleyo lomqolo, umhlathi omkhulu wokususa ubulungu kunye nokumiswa kwamalungu ebhola ukuya kuthi ga kububanzi obungama-30mm
* Isicelo: I-Audi, Mazda, Benz, BMW
Isahluli seBhola esiDibeneyo
* Ibhola ehlangeneyo isahluli sokususa ubulungu kunye nokumiswa kwamalungu ebhola ukuya kuthi ga kwi-20mm ubukhulu.
* Uyilo lokususa isiphelo sentonga yengalo kwisandla sokuqhuba ngaphandle kokwenza umonakalo kwipini yokuthintela.Ilungele iimoto ezininzi ze-samll kunye neeveni ezikhanyayo.
* Umhlathi womthamo: 17mm